ဖေဖော်ဝါရီ9| PoemsCorner
မအိလေးရေကျွန်တော်မရ ရအောင်စိတ်ကူးပြီးတော့ကဗျာလေးကိုရေးခဲ့တယ်ဒီကဗျာကိုရေးနေရင်းနဲ့ 
ကျွန်တော်စိတ်တွေမနဲထိန်းချုပ်ထားရတယ် မွေးနေ့ ကဗျာလေးပေါ်မှာ ဒေါသတွေမစွန်းမိအောင်လို့ 
ကျွန်တော်မွေးလာကတည်းက 1995.2.9 ရက်ကသာကျွန်တော့်ရဲ့ မွေးနေ့ ဖြစ်ပြီးကျန်တာတွေကတော့
ဘာမှမဆိုင်တော့တဲ့ နေ့ ရက်တွေပါပဲ မွေးနေ့ ဆိုတာတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး အဆိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော့်မွေးနေ့ ကို
အိမ်ကမိသားစုဝင်တွေတောင်မသိကြတာပဲ ညီအစ်ကိုအရင်းတောင်မှမသိဘူးတဲ့ခင်ဗျာ ရေးနေရင်းနဲ့ ကျွန်တော်စိတ်တွေ
တင်းလာသေးတယ်အဲ့အကြောင်းတွေရေးအုံးမလို့့ပါဒါပေမဲ့ မကောင်းပါဘူးလေဆိုပြီးအခုလိုလေးပဲရေးလိုက်တာပါ
မွေးတဲ့ရာသီ နွေနဲ့ ဆောင်းကြား
ဂုဏ်ထူးဆောင်နေ့ ရက်တို့ နဲ့ 
ဒီနေ့ ခေတ်ရဲ့Birthday Wish တွေ
In: ကဗျာ Posted By: loafer Date: Feb 9, 2013
“ ဖေဖော်ဝါရီတစ်ဆယ့်သုံး ( သို့ ) ရင်ထဲက မွေးနေ့ ”
စုံဂဏန်း ကျ တဲ့ လ………..
Leave comment 13 Comments & 376 views
By: ei lay at Feb 9, 2013
အိကြောင့် loafer စိတ်ဆင်းရဲသွားရတာ တောင်းပန်ပါတယ်
အိကြောင့်loafer စိတ်ဆိုးရတဲ့အတွက်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်နော်
wishing u have happy lovely longer life span with ur beloved.
ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်.။ ကိုယ့်ရဲ့ မွေးနေ့ကို မိသားစုဝင်တွေကတောင်မသိဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော်ခံစားကြည့်မိသလောက် တော်တော်ကို စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းပါတယ်.။ ကျွန်တော် စာနာမိပါတယ်.။ ဒါပေမဲ့ ညီလေး… မင်းဒေါသထွက်နိုင်ပါတယ်.။ စိတ်နာနိုင်ပါတယ်…။ ဒါပေမဲ့ အားတင်းထားပါ.။ ခံစားရတာတွေ အရမ်းပြင်းထန်လာတဲ့အခါ ကဗျာတွေနဲ့ထွက်ပေါက်ပေးဖို့ မင်းမှာ အခွင့်အရေးရှိတာဘဲ.. Poemscorner မှာနွေးထွေးတဲ့ နှလုံးသားတွေ အများကြီးပါ ညီလေး.။
February9ရက်နေ့ကို ကျွန်တော်မှတ်သားထားလိုက်ပြီ.။ ငါတို့ဟာ ဒီနေရာလေးမှာ နှလုံးသားချင်းမဝေးတဲ့ ညီအကိုတွေလို့ သဘောထားလို့ မှတ်သားလိုက်တာပါ..။ ညီအကိုအရင်းက မသိပေမဲ့ ညီလေးရေ….မင်းမွေးနေ့ကလေးကို နောင်နှစ်တွေမှာ P.C မှာအကိုရှိသေးရင် ပထမဆုံး ဆုတောင်းပေးသူ အဖြစ် အကိုရှိနေပေးမယ်။ (ကတိပေးတာပါ)
ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ရသော မွေးနေ့ကို ဖန်တီး၍သော်လည်းကောင်း .. တစ်စုံတစ်ရာကြောင့်သော်လည်းကောင်း .. ထိုက်တန်စွာ ရရှိနိုင်ပါစေ..။ (နောက်နှစ်တွေမှာရော)
By: နိုးဆက် နေ့ at Feb 9, 2013
။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။။
။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။
( BIRTHDAY CAKE ကြီးပေါ့ ညီလေးရာ… ဖယောင်းတိုင် ဆယ့်ရှစ်တိုင်နဲ့ပေါ့ .. မတူပေမဲ့ ခံစားလို့ ရမှာပါ )
***** Happy Birthday Loafer *****
~~~~~HAPPY BIRTHDAY ~~~~~brother
ကျွန်တော့် ကဗျာမောင်နှမလေးကို အားးးးအကြီးကြီးပေးသွားပါတယ်
By: athaekwelmoe at Feb 10, 2013
hote par p.
ya nae hma sa naung htit paung myar swar sate chann tar.kou kyann mar phyit pyaw shwin taw ba wa laee ko pine sine ya par say.
happy lovely birthday to sweety loafer.
ထာဝရ P.C မှာကဗျာတွေေ၇းနေမှာပါ ကဗျာညီအစ်ကိုမောင်နှမများနှင့်အတူ 🙂
By: loafer at Feb 10, 2013
ko set loak pay de birthday cake g ko be tone ka sarr like dar tone?
ei le ma ti like ya par lar?
By: မေပျို at Feb 10, 2013
ကိုLoafer Happy Birthdayဗျာ မွေးနေ့မှာစိတ်ချမ်းသာပါစေ ကုသိုလ်တွေအများကြီးရပါစေ ကျွန်တော့ Birthday wish က နောက်ကျသွားတယ်နော် တောင်းပန်ပါတယ် မွေးနေ့မှာ စိတ်ကိုအကြည်လင်ဆုံးထားပါဗျာ ဘယ်သူမှခင်ဗျားမွေးနေ့ကိုမမှတ်မိလည်းဘာဖြစ်လဲ ခင်ဗျားအားငယ်နေ့ဖို့မလိုပါဘူး ခင်ဗျားမွေးနေ့ကိုခင်ဗျားသိရင်ပြီးတာပဲ အဓိကက ကိုယ့်မွေးနေ့မှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတစ်ခုလောက်လုပ်နိုင်ဖို့ဘဲမဟုတ်လား တစ်ချို့လူတွေဆို သူတို့မွေးနေ့တောင် သူတို့မသိရရှာပါဘူးဗျာ ~~
By: X - ray at Feb 11, 2013
By: loafer at Feb 11, 2013
By: loafer at Jul 27, 2014